Kupfuura zana shanduko pakati pe beta 100 uye beta 3 ye iOS 4 | IPhone nhau
Sezvakaitika masvondo mashoma apfuura, Apple yakaburitsa iOS 4 beta 11 yevashandisiPamwe pamwe nedzimwe shanduro dze beta dzevagadziri. Iye zvino isu takamirira kuburitswa kweshanduro imwechete yevashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta uye apo izvi zvichiitika tichaona dzese nhau dzeiyi vhezheni nyowani mune ino yazvino beta yakatangwa nevakomana kubva kuCupertino.
Kuti uone misiyano iyi usinga fanirwe kuisa iyo beta pane yedu iPhone kana iPad, zvakanaka kumirira zvinyorwa zvakaburitswa nevagadziri asi mune iyi nyaya, sezvatakaita pakati pe beta 2 ne3, tine vhidhiyo retsime- inozivikanwa youtuber ye ona shanduko uye kugadzirisa kwakaitwa pakati peshanduro mbiri idzi.
Isu tinotaura nezve chiteshi EverythingApplePro iyo ine mumaoko ake mamodheru akati wandei eiyo iPhone uye neiyi anokwanisa kuisa akasiyana beta beta shanduro dziri kuvhurwa. Izvo iwe zvaunowana kuve nesarudzo yekuisa zvese zvishandiso padivi uye ona misiyano yese pakati pe beta vhezheni ye iPhone. Vhidhiyo iyi inongotora anopfuura maminetsi gumi nerimwe uye inotiratidza zvinopfuura zana shanduko kana kugadzirisa kwakaitwa pakati peshanduro mbiri idzi:
Vhidhiyo yacho iri muChirungu asi isu tinogona kunyatsoona shanduko sezvo ichivaratidza zvakajeka. Uyezve unogona kuzviona kumwe kwekuvandudza uku hakuonekwe kune vashandisi sezvo iwo ari mashoma ruzivo uye zvinonetsa kuwana kana iwe usina michina miviri yekuenzanisa, asi mumavhidhiyo aya zvinonyatsoonekwa. Ipapo isu tine ruzivo nezve iyo fluidity, kugadzikana uye kushandiswa kwebhatiri kunoenderana nezvimwe zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kupfuura zana shanduko pakati pe beta 100 uye beta 3 ye iOS 4
Foxconn Inogona Kuzivisa Zvirongwa zvekuwedzera zveUS Vhiki Ino